🔥Mr Veinz Dragon Pharma: Fampiofanana mialoha, tombontsoa ary fomba fandraisana
Ny iray amin'ireo fampihetseham-batana mialoha indrindra nafarana izay manana fangaro tsy manam-paharoa sy tsy misy fangarony premium premium izay kendrena amin'ny fampisehoana ara-batana faran'izay betsaka dia Andriamatoa Veinz - Dragon Farma.
Ity vokatra ity dia noforonina manokana niaraka tamin'ny raikipohy izay manome ny tena tsara indrindra amin'ny fitambarana afaka mitaona tsara ny fiakarana avo indrindra sy ny tampon'ny fahombiazan'ny fiofanana amin'ny fanatanjahan-tena rehetra.
Andriamatoa Veinz dia iray amin'ny sainam-piaramanidina Dragon Pharma ary mikendry indrindra ireo olona izay tsy mahomby amin'ny enta-mavesatra be nefa tsy afaka miala amin'ny fampiofanana mialoha izay manome paompy, vasodilation, angovo ary tanjaka bebe kokoa.
Inona moa Andriamatoa Veinz - Dragon Pharma?
Ity fampiofanana mialoha ity dia iray amin'ireo nentim-paharazana novokarin'ny marika, satria nandia fanavaozana maro sy fanatsarana ny endriny hatramin'ny nanombohany niditra tao amin'ny tsena.
Dragon Pharma dia nitady hanamboatra fanazaran-tena mialoha izay nanambatra ny karazana tombontsoa rehetra notadiavin'ny bodybuilder indrindra izay afaka nampiakatra ho azy ny haavon'ny asa ara-batana ary nanosika ny fetran'ny zava-bitan'ilay olona nefa tsy niteraka voka-dratsy.
Andriamatoa Veinz - Dragon Pharma dia kinova fanazaran-tena mialoha ny fampihetseham-po izay tsy dia misy dikany firy ny stimulants, saingy tsy atao ambanin-javatra ny vokatry ny fanatsarana ny fifantohana sy ny fampitomboana angovo alohan'ny fampiofanana amin'ny ankapobeny.
Ho fanampin'izany, dia misy akora tsara indrindra mifandraika amin'ny herin'ny hetsika ilaina mba hanomezana paompy, vasodilation, fitomboan'ny tanjaka, fifantohana ary angovo tsy misy voka-dratsy ateraky ny fanentanana be dia be.
Fa inona izany Andriamatoa Veinz?
Amin'ny maha-fiofanana mialoha tsara azy, Andriamatoa Veinz dia ampiasain'ny bodybuilder izay mitady hanangona ny tsara indrindra amin'ny vatana mandritra ny fampihetsehana ao amin'ny gym.
Ity dia vokatra misy andian-dahatsoratra mahavita manao ny vatana mihoatra ny fetrany voajanahary amin'ny fahombiazany, izany hoe, mitondra aingam-panahy mahery vaika hahatonga ny fiofanana hahatratra ny avo kokoa.
Ity herin'ny hetsika ity dia azo ampiasaina amin'ny fomba stratejika ihany koa amin'ireo andro izay tsy an-katerena ny toe-tsaina, satria amin'ny fatra tokana an'i Andriamatoa Veinz - Dragon Pharma dia mitombo ny angovo sy ny tanjaka ary hamela anao aminao aza diso amin'ny fiofanana ary mbola mahavita mihoatra ny fetrao.
Ny sasany amin'ireo vokatra hafa amin'ity fampiofanana mialoha ity dia misy fiovana ara-batana ihany koa, satria mahazatra ny mpampiasa ny mampiasa azy io mba hanatsarana ny vokatry ny paompy sy ny vasodilation mandritra sy aorian'ny fiofanana.
Ny tanjona dia ny famelana ny hozatra ho feno faran'ny ra sy ny habetsany hitombo be hatramin'ny nahatonga an'io fiovana hatsarana io amin'ny fanazaran-tena vita.
Izy io koa dia mankafy ny fahazoana tanjaka, ahafahana manao seta bebe kokoa miaraka amin'ny famerimberenana bebe kokoa ary amin'ny enta-mavesatra bebe kokoa noho ny mahazatra, manamafy ny volan'ny fiofanana arak'izay azo atao.
Soa azo avy amin'i Andriamatoa Veinz - Dragon Pharma
Raha mbola vita tsara ny fampiasana an'ity pre-workout ity dia azo atao ny manararaotra ireo tombony lehibe azony ho an'ny fampihetseham-batana avo lenta sy amin'ny fahombiazana farany azo atao amin'ny fomba voajanahary.
Amin'izao fotoana izao, Andriamatoa Veinz dia raisin'ireo mpampiasa maro ho iray amin'ireo feno indrindra amin'ny sokajy, ary ny kinova nafarana dia misy kojakoja faran'izay avo lenta izay mazàna tsy misy amin'ny saika fanazaran-tena rehetra.
Amin'ny alàlan'ny fampidirana ity mialoha ny fampiofanana alohan'ny fampiharana ny karazana hetsika ara-batana dia azo atao ny mahazo ireto tombony manaraka ireto:
Maharitra kokoa ny paompy;
Fampitomboana angovo sy hery ara-batana;
Fanatsarana ny fampisehoana ankapobeny;
Fampihenana ny havizanana;
Haingam-pandeha haingana kokoa eo anelanelan'ny andiany;
Mitombo angovo sy ny toe-po;
Ahoana ny fampiasana an'Andriamatoa Veinz?
Mba hahafahana mahita ny tombony rehetra amin'ity fampiofanana mialoha ity dia ilaina ny fampiasana azy araka ny tolo-kevitr'ireo mpanamboatra.
Satria izy io dia vokatra miasa manaitaitra ny vatana, Andriamatoa Veinz - Dragon Pharma dia tokony horaisina amin'ny vavony foana, kokoa ny 30 minitra alohan'ny fampiofanana.
Amin'izany no handraisan'ny vatana tsara kokoa ireo akora ireo ary hihamafy kokoa ny vokany tsara.
Ny tolo-kevitr'ireo mpanamboatra dia scoop 1 fotsiny an'i Andriamatoa Veinz nalaina tamin'ny ranomandry.
Aza atao ny mandray mialoha ny fampihetseham-batana amin'ny vavony feno, satria mety hiteraka aretin'andoha, fandevonan-kanina tsy mahomby ary hanakantsakana ny vokatry ny vokatra.
Ny voka-dratsin'i Andriamatoa Veinz - Dragon Pharma
Andriamatoa Veinz dia tsy manana stimulants be loatra, noho izany, tsy misy fiatraikany lehibe toy ny ankamaroan'ny fiofanana mialoha hita eny an-tsena.
Na izany aza, satria misy kafeinina ao anaty endriny, ny olona saro-pady dia mety hijaly amin'ny vokadratsiny sasany toy ny:
Aiza no hividianana an'Andriamatoa Veinz amin'ny vidiny tsara indrindra?
Iray amin'ireo fomba tsara indrindra hahazoana antoka fa afaka mividy Andriamatoa Veinz ianao - Dragon Pharma amin'ny vidiny mety indrindra dia amin'ny alàlan'ny fivarotana azo antoka izay efa niasa nandritra ny taona maro niaraka tamin'ny fanampin-tsakafo sy ireo vokatra nafarana amin'ny ankapobeny.
Ny fandaniana ny fividianana vokatra tsy sandoka dia fandaniam-bola sy fotoana fotsiny, koa mankanesa any amin'ny tranokala Best Supplement Store ary zahao ny tolotra atolotry Andriamatoa Veinz.
Ity dia fampiofanana mialoha tena avo lenta ary mety ho lakilen'ny fanaovana ny fiovan'ny hatsarana eo amin'ny vatanao hitranga haingana.
Midira amin'ny tranokala fivarotana Supplement tsara indrindra izao amin'ny alàlan'ny FITSIPIKA IZAO, ary manome toky an'Andriamatoa Veinz - Dragon Pharma anao.
Aza mandany fotoana, tsapao amin'ny hoditrao ny tombo-tsoa mahavariana azo omen'ity fampiofanana mialoha anao ity ary ho hitanao manokana ny fomba mety hampiasan'ity vokatra ity amin'ny tanjonao.
Tags:mr roapolomr twenty dragon pharmapre workout roapoloroa-polo ambyveinz dragon pharma